Qooda diyaaspooraa guddina dinagdee keessatti
Hirmaannaan lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan misoomaa biyyasaaniif taasisaan kan jajjabeeffamuudha. Lammiileen kunneen beekumsaafi maallaqa qabaniin dameelee hojii gara garaarratti bobba'uun misooma biyyattii akka utubaniif haalli mijataan gama mootummaatiin uumameera.
Guddina dinagdee biyyattiin yeroo gara yerootti galmeessaa, toora biyyootaa galii giddugaleessaa argatanii hiriiruuf qabatte bira gahuuf tarkaanfataa jirtu keessatti qoodni lammiilee biyyattii biyya alaa jiraataanii olaanaadha. Kanaaf, hirmaannaasaanii cimsuuf waltajjiin marii tibbanaa geggeeffameera.
Waltajjii kanarrattii hirmaannaan lammiilee biyya alaa jiraatanii gama invastimatii, sharafa alaa, teknolojiifi kan biraan maal akka fakkaatu dhiyaateera. Haaluma kanaan hirmaannaan lammiilee kanneenii yeroo ammaa sadarkaa jajjabeessaarraa akka jiruudha kan eerame.
Lammiileen biyyattii misooma keessatti hirmaachisuuf sagantaa qophaa'een fooyya'iinsa qajeelfamootaa taasifameen qooda fudhannaansaan diyaaspooraa fooyya'aa akka jiruudha Ministeera Dhimma Alaatti daarektarri dhimma diyaaspooraa Obbo Dammaqaa Axnaafuu kan ibsan.
Akka isaan ibsanitti, dameelee invastimantii, turiizmiifi daldalarratti bobba'uu kanneen fedhan lammiilee biyya alaa jiraatan 171 naannolee filatanitti hojiitti akka bobba'aniif deeggarsiwwan gara garaa taasifamaniiru.
Isaan kunneenis seektaroota maanufaakchariingiitiin 74, kenniinsa tajaajilaatiin (barnoota, fayyaa, tajaajilaa qulqulleessa konkolaataa ammayyaatiin 36), qonnaan 31, agiroo piroosesiingiin 18, konistiraakshinii, daldala, ijaarsa manaafi intarpiraayizii maayikiroofi xixiqqaarratti kanneen bobba'an akka ta'an eeran. Kurmaana jalqabaa bara 2010ttis lammiileen biyyattii biyya alaa jiraatan 45 eeyyama invastimantii baafachuun gara hojiitti seenaa akka jiraniidha kan dubbatan.
Gama ce'umsa teknolojiitiin guddina biyyattiin eegalte saffisiisuuf gumaachi diyaaspooraa olaanaadha. Gama kanaanis baatiiwwan sadan darbanitti ogeessonni lammiilee biyyattii turtiisaanii biyya alaatiin beekumsa horatan dhaabbileefi waajjiraalee 12f muuxannoo qaban akka qoodan taasifameera.
Leenjiiwwan garagaraa ogeesonni kunneen dhaabbilee gara garaatti kennan cinaatti, wiirtuu teknolojii tokko hundeessuuf qondaaltota Ministeerota Saayinsiifii Teknolojiifi Barnootaa waliin marii taasisaaniin waliigalteerra ga'amuudha daarektarichi kan ibsan. Kanaanis naannolee gara garaattii hirmaannaan diyaaspooraa cimaa akka jirus himaniiru.
Ministeera Dhimmaa Alaatti Ministir De'eetaan Dhimmoota Diyaaspooraafi Bizinasii Dr. Akiliiluu Hayilamikaa'el gamasaaniin, hirmaannaa lammiilee biyyattii biyya alaa jiraatanii, gama dinagdeetiin jiru cimsuuf haala mijataan jiraachuusaati kan eeran.
Lammiileen biyyattii biyya alaa jiraatan bara darbe doolaaraa biliyoona 4.6 gara Itoophiyaatti erguun madda galiifi sharafaa alaa argamsiisuusaanii ibsaniiru.
Hirmaannaa gama kanaan jiru fooyyessuuf qorannoo taasifameen maallaqni idileen ala ergamaa ture caalmaan daandii idilaa'een akka ta'uu gochuun danda'ameera.
Gama invastimantiitiinis hirmaannaan jiru fooyya'aa akka jiru himanii, Finfinneetti qofa qarshii biliyoona 7.5 hojiin invastimantii geggeeffamu ibsan. Waggaa waggaadhaanis lammiileen kumaatamatti lakkaa'aman hojii invastimatiirratti bobba'uudhaaf gaaffii dhiyeessa akka jiran dubbatan. Gamaa ce'umsa teknolojiitiinis hirmaannaa cimsuuf haalli mijataan umamuu akka qabu ibsan.
Walumaagalatti, hirmaannaan diyaaspooraa tarkaanfii guddina dinagdee biyyattiif tumsa olaanaadha. Guddinni dinagdee lammiilee biyyattii hundaa waan hirmaachisuuf, lammiileen biyya alaa jiraatanis qoodaasaanii yoo bahatan, guddina dinagdee eegalame kan saffisiisuudha.
Kanaaf, hirmaannaa lammiilee biyyattii biyya alaa jiraatanii cimsuuf gama hundaan haala mijataa uumuun, gumaachaasanii danqaa tokko malee akka bahatan taasisuun murteessaa ta'a.
Torban kana/This_Week 17516
Guyyaa mara/All_Days 1442296